Philadelphia တွင်ရာသီအလိုက်ရာသီဥတုအခြေအနေသည်အဘယ်အချိန်၌ Netflix တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ - တီဗီ
ဒါဟာ Philadelphia တွင်ရာသီ 11 အတွက်အမြဲတမ်းနေသာရဲ့ Netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ?
PHILADELPHIA, PA - ဇူလိုင် ၁ ရက်။ ။ Philadelphia ရှိ Pennsylvania ပြည်နယ်၊ Philadelphia တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ Philadelphia တွင် sitcom တွင် It Always Sunny တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Glenn Howerton၊ Danny DeVito၊ Kaitlin Olson၊ (Gilbert Carrasquillo / GC Images မှဓာတ်ပုံ)
iZombie Season3သည် CW နှင့် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။ အံ့’s ခြင်းရဲ့ Runaways Hulu မှလာမယ့်နေသည်
Netflix မှာ Philadelphia တွင်ရာသီ 11 လွှတ်ပေးရေးနေ့စွဲအတွက်ဒါဟာအစဉ်အမြဲနေသာဖြစ်သနည်း
သင်ဂိုဏ်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရန်မည်သည့်အချိန်တွင်တွေ့နိုင်သည်ကိုရှာဖွေရန်စိတ်ဝင်စားသည် ဒါဟာ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာပါတယ် Netflix အပေါ်ရာသီ 11? သင်မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။
UPDATE: ရာသီ ၁၁ ရက်သည် Netflix သို့ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်တွင်ရောက်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ကြောင်းအတိအကျရက်စွဲမသိရပါဘူးနေစဉ် ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ Season 11 ကို Netflix တွင်ဖြန့်ချိမည်။ နောက်ဆုံးရာသီကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မျှော်လင့်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသဘောပေါက်သည်။ မျှော်လင့်ချက်ကမင်းမှာအရင်စီးရီးကိုမီဖို့အချိန်အလုံအလောက်ရှိလိမ့်မယ် ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ ရာသီ 12 FXX အပေါ် Premieres ။
၏အတိတ်နှစ်ခုရာသီအပေါ်အခြေခံသည် ဒါဟာ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာ, ကျနော်တို့စီးရီး၏ 12 ရာသီဇန်နဝါရီလ FXX အပေါ်ပြသခဲ့သည်ရာသီ 10 နှင့်ရာသီ 11 တစ်ခုချင်းစီကိုဇန်နဝါရီလတွင် 2017 ဇန်နဝါရီလတွင် premiere လိမ့်မည်ဟုယူဆသွားကြသည်, ငါတို့ရာသီ 12 အလားတူအချိန်ဇယားအတိုင်းလိုက်နာမျှော်လင့်ထား။
ထိုအမှုဖြစ်လျှင်, သင်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ် ဒါဟာ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာပါတယ် Netflix ပေါ်ရှိရာသီ ၁၁ သည်ရာသီအလိုက်ပြသမှုမတိုင်မီကစပြီးစာသားအရဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ ရာသီ ၁၀ ကို Netflix တွင်ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်ကဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၊ ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ ရာသီ 11 FXX တွင်ပြသခဲ့သည်။
ပြီးတာနဲ့ ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ ရာသီ 12 ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုကြေငြာသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အတိအကျသိလိုသည် အမြဲတမ်းနေသာ t ကို ရာသီ 11 ကို Netflix တွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်အထိ, ရာသီ 11 ပတ်ပတ်လည်နှစ်ကုန်ပြီးနောက် Netflix ကိုထိတွေ့ရန်မျှော်လင့်ထားသင့်သည်။
ငါတို့အတွက်ဒီလှောင်ပြောင်တဲ့နောက်တွဲယာဉ်ကိုမျှဝေလိုက်တယ် ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ အောက်ကရာသီ 11 ။ ရာသီ Netflix မကျရောက်မီ၎င်းသည်ခဏတာဖြစ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရရန်ကြိုးစားပါ။
ဒါဟာ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာပါတယ် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ နှင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗီရုပ်သံ ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။ သင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် Netflix ပေါ်စီးဆင်းရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အစီအစဉ်များအတွက်အဆင့်များကိုစစ်ဆေးပါ ဒါဟာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ streaming ကိုဝန်ဆောင်မှု hit ရာသီ 11!
netflix အပေါ် deadpool2ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါမွေးမြူရေးခြံ 2019 ၏ရာသီသစ်
ကဒ်များ Tim Corbett အိမ်သူအိမ်သား
မင်းရာသီ3ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ